संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ भइरहेका चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको खुलासा !
काठमाडौँ । संसद् विघटनविरुद्धको रिटका विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका वेला चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेको खुलासा भएको छ । विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको बेला चार न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर छलफलसमेत गरेको खुलेको हो । विस्तृतमा
विपद् व्यवस्थापनः राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति ल्याइँदै
कला कौशल प्रस्तुत गर्दै सैनिक
कोरोना जितेर बैंकमा आउँदा बरुवालले जागिर गुमेको पत्तै पाएनन् !
मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरी सुनका गहना र झोला चोरी गर्ने दुई युवा पक्राउ
लहान । नगरक्षेत्रका दलित, विपन्न परिवारका ५० गर्भवती महिलालाई सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाले आज बिहान बाख्रा वितरण गरेको छ ।
दार्चुला । गएराति अबिरल वर्षाका कारण नौगाड खोलामा आएको बाढीले पुल बगाएको छ । नौगाड गाउँपालिका–६ स्थित नौगाड खोलामा आएको बाढीले पुल बगाएपछि जनहित माविमा सञ्चालन भइरहेको प्रथम चौमासिक परीक्षा स्थिगित गरिएको छ ।
बेनी, म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–ं ३ दानाको तितरमा गएराति आएको पहिरोका कारण मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सिल्क रोड इन्टरनेसनल कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको निमन्त्रणामा
जावलाखेलकाे चिडियाखाना सूर्यविनायकमा विस्तार गरिने
ललितपुर । सदर चिडियाखाना केही वर्षमा सूर्यविनायकमा विस्तार गर्नका लागि तयारी थालेको छ ।
गैँडाकाे खाग र सालककाे खपटासहित चारजना पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले राजधानीको सुकेधारास्थित दियो रेष्टुरेन्टमा गैँडाको खाग बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौँ । मुलुकको मौसमी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दैनिक रु २० हजारको मौसमी बेलुन उडाउँदै आएको छ ।
महोत्तरीमा बैंकका कर्मचारीको साथबाट १७ लाख लुटियो
काठमाडौं । प्रभु बैंकका कर्मचारीको साथबाट महोत्तरीमा १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ लुटिएको छ । महोत्तरकिो मनराबाट जलेश्वरतर्फ रकम बोकेर जाँदै गरेका बैंकका कर्मचारीलाई हतियारधारी समुहले रकम लुटेको प्रहरीले जनाएको छ ।